Wararka Suuqa Kala iibsiga : Kuwa Maanta laga qoray Sterling, Vlahovic, Zidane, Pochettino, Rangnick, Zinchenko, Milinkovic-Savic | laacibfm.com
Home Laacib Wararka Suuqa Kala iibsiga : Kuwa Maanta laga qoray Sterling, Vlahovic, Zidane,...
Wararka Suuqa Kala iibsiga : Kuwa Maanta laga qoray Sterling, Vlahovic, Zidane, Pochettino, Rangnick, Zinchenko, Milinkovic-Savic
Manchester City ayaa sare u qaadi doonta dadaalkeeda ku aadan sidii ay ku heli lahayd 26 jirka garabka uga ciyaara xulka qaranka England ee Raheem Sterling kaas oo lala xiriirinayo kooxda Barcelona, heshiis waqti dheer ayay ka doonayaan. (Telegraph)
Manchester United ayaa ku biirtay kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Tottenham iyo Newcastle United kuwaas oo doonaya saxiixa 21 jirka reer Serbia Dusan Vlahovic oo ka tirsan Fiorentina. (Dailymail)
Paris St-Germain ayaa wadahadalo la yeelatay Zinedine Zidane xilli ay isku diyaarinayeen suurtagalnimada in tababare Mauricio Pochettino uu ku biiro Manchester United. (Metro)
Ralf Rangnick, oo qarka u saaran inuu si ku meel gaar ah u noqdo tababaraha Manchester United , ayaa markii hore diiday dalab ka hor inta uusan aqbalin shuruudo cusub. (Manchester Evening News)
Manchester United ayaa wali dooneysa Pochettino inuu qabto shaqada tababaranimo xagaaga soo aadan, inkastoo uu imaanayo Rangnick. (90min)
Weeraryahanka Manchester City ee dhanka bidix ee Ukraine Oleksandr Zinchenko, 24, ayaa ku jira liiska bartilmaameedyada Newcastle ee Janaayo. (Dailymail)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic-Savic, oo 26 jir ah, ayaa bartilmaameed u ah Manchester United si uu ugu bedelo 28 jirka khadka dhexe ee France Paul Pogba, kaasoo qandaraaskiisu uu dhacayo xagaaga. (Fichajes)
Chelsea ayaa horumar ka samaysay wadahadalada heshiis kordhinta ee ay la gashay daafaceeda Denmark Andreas Christensen, 25, kaasoo qarka u saaran inuu noqdo wakiil xor ah xagaaga soo aadan. (FootballInsider)
Barcelona ayaa isha ku haysa in ay u dhaqaaqdo saxiixa weeraryahanka Basel Arthur Cabral laakiin waa in ay iibiso qaar ka mid ah ciyaartoyda ka hor inta ayna u dhaqaaqin 23 jirka reer Brazil. (Goal)
Qandaraaska garabka Croatia ee Ivan Perisic ee Inter Milan ayaa dhacaya Juun 2022, 32 jirkaan wuxuu yiri “wax walba waa suurtagal, waxaan arki doonnaa dhowr toddobaad gudahood” markii wax laga weydiiyay mustaqbalkiisa. ( Football Italia)
Inter Milan ayaa rajo ka qabta in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Croatia Marcelo Brozovic uu saxiixo qandaraas cusub, iyadoo 29 jirkaan uu qandaraaskiisu dhacayo xagaagan. (90min)
Tababaraha AC Milan Stefano Pioli, oo 56 jir ah, ayaa jimcaha saxiixi doona qandaraas cusub oo labo sano oo dheeri ah. (Calciomercato)
Previous articleManchester City oo isku diyaarinaysa inay sare u qaaddo wadahadalada heshiis kordhinta ee Raheem Sterling
Next articlePedri oo Garoomada ka Maqnaanaya inta ka dhiman Sanadkan Sida Barcelona ay Xaqiijisay
Horudhac: AC Milan Vs Sassuolo ee Horyaalka Serie A Taliyaaniga Wararka...
kulamo ka tirsan Horyaalka Dalka Taliyaaniga ayaa la ciyaarayaa maanta iyadoo kooxda Ac Milan ay garoonkeeda ku soo dhaweeneyso Sassuolo. Ac Milan ayaa kulankan...